‘काउन्टडाउन’ सुरु ७२ घण्टामा अर्थमन्त्री खतिवडा पदमुक्त हुने
2020-09-03 11:09 Hamro Biratnagar
काठमाडौं, भदौ १८ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल सकिन आँटेको छ । अब उनी आइतबार राति १२ बजेसम्म मात्रै अर्थमन्त्री रहन पाउनेछन् । खतिवडाको ७२ घण्टे ‘काउन्टडाउन’ सुरु भएको छ ।
०७६ साल फागुन २१ डा. खतिवडालाई पुनः नियुक्ती दिएको थियो । उनले २१ गते नै सपथ-ग्रहण गरे र गरेको दिनदेखि गणना गर्दा भदौ २१ गते राति १२ बजे उनको ६ महिने पदावधि समाप्त हुन्छ । संविधानअनुसार संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न मिल्दैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा डा. खतिवडाले करिब अढाइ वर्ष अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गरे । उनले फागुन २० गते कार्यकाल समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए र भोलिपल्टै २१ गते उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए । सो पुनःनियुक्तिको ६ महिने कार्यकाल पनि समाप्त हुने समय आइपुगेको छ ।
« जुवा खेल्ने एक दर्जन व्यवसायी प्रहरी नियन्त्रणमा
कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा.सुजितकुमार शाह मृत फेला »